KSplash noma 'Simple' BootSplash ye-ArchLinux neChakra Linux | Kusuka kuLinux
El I-KSplash (owaziwa nangokuthi I-BootSplash) yilokho opopayi, noma umphumela wokuthi i- KDE Kusikhombisa lapho singena ngemvume, okungukuthi, lokho esivame ukukubona:
Imele kahle kakhulu I-ArchLinux ... elula, elula, enhle 😀
1. Landa ifayela: Landa i-ArchLinux KSplash elula
3. Uma sesifikile lapho, siya kubha yesobunxele lapho kuthiwa khona «Isikrini se-Annunciator".
Ngishiyela ezinye izithombe ukuze uziqonde kangcono:
Futhi i-voila, izofakwa futhi ilungiselelwe 😀
Uma usebenzisa I-Chakra Linux, lapha futhi unethuba lokusebenzisa okufana nalokhu:
Landa i-Simple Chakra KSplash
Futhi ... lokho kwe Chakra iqiniso lingcono, ngoba ilogo iyavela (amacembe) njengoba ideskithophu ilayisha 🙂
Kwaphinda futhi haha, omunye umnikelo omuhle kakhulu ovela ku- mcder 😀
Ukubingelela futhi ujabulele, kusukela izolo ngisebenzisa indlela ye- Arch 🙂
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Ukubukeka / Ukwenza ngezifiso » KSplash noma 'Simple' BootSplash ye-ArchLinux ne-Chakra Linux
Ilula kakhulu futhi inhle, bengibathanda kakhulu njengamanje ngilanda i-chakra eyodwa.
Yebo ... ¬_¬ ... iqiniso ukuthi iChakra enaleyo mphumela yokubonisa amacembe e-logo ipholile kakhulu ... i-ggggrrrr ne-Arch's ayinanto epholile ¬_¬
Mhlawumbe kungakuhle ukwenza i-Arch ivele ngokusobala okungu-0%, bese kuthi ngenkathi uyilayisha ibe no-30%, 40%, 50% obala, bese wehlise ukubonakala kanye futhi kusuka ku-50% kuye ku-40%, 30%, 0%. Kungaba yini lokho kupholile? … I-logo ka-Arch icwayiza haha ​​😀
mcderKungaba yinkimbinkimbi kangakanani ukwenza lowo mngani?
Ngabe kuzoba nzima ukwenza splash efanayo kwamanye ama-distros?
Akunjalo neze 😀
Shintsha lokhu bese ubeka ilogo yeKubuntu, iPardus noma amanye ama-distros ayinzima 🙂 Noma yisiphi isicelo? 😀
Ngisebenzisa i-chakra elula, ngiyayithanda, iphepha lodonga ledeskithophu elincane eliluhlaza okwesibhakabhaka kanye ne-kdm helium eyodwa, ushintsho olusuka ku-kdm luze imithwalo yedeskithophu ibe nkulu. Konke kusebenza → mcder
Lokhu ukuphela kwento engekho ku-Caledonia suite, i-splash ezenzakalelayo incane kakhulu, ngakho-ke nge-bar nelogo elungile iyi-100!
I-KZKG ^ Gaara, uyazi ngamakhasi athile wokulanda izindonga ngesinqumo esingu-1024 × 1366, enezindonga ezinhle ongazithokozela nge-chakra? Ngibingelela umphakathi wonke kusuka ku-linux.net
Ifonti yeMint Spirit